Somalia iyo Qatar oo ka wada hadlay arrin muhiim ah oo la xiriirta… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somalia iyo Qatar oo ka wada hadlay arrin muhiim ah oo la xiriirta…
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax oo booqasho rasmi ah oo saddex maalmood ah ku gaaray magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar, ayaa la kulmay Wasiirka Horumarinta Maamulka, Shaqada iyo Arrimaha Bulshada dalkaas, Mudane Yousef Bin Mohammed Al Othman Fkhroo.
Kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga dhismaha awoodaha waaxyaha Dawliga ah, isku xirka suuqyada Shaqada ee labada dal iyo furitaanka suuqa Shaqada Qatar.
Wuxuu muhiimad u lahaa kulankan dadaallada aan ku dooneyno inan ku xoojino awoodda hay’adaha Dawladda gaar ahaanna Shaqaalaha.” ayuu yiri Wasiir Duraan oo inta ku daray “ Qatar waa dal muhiim u ah fursadaha shaqooyinka, hadda waxaan kala xaajoonay xirfadlayaasha iyo Shaqaalaha Soomaaliyeed in loo furo suuqa Shaqada ee dalkaas.”
Wasiir Duraan, waxaa socdaalkan ku weheliya saraakiil sare oo ka tirsan Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, iyadoo muddada ay halkaa ku suganyihiin kulamo la qaadanaya saraakiisha sare ee Dalkaas.
Dadkii ku dhaawacmay Dagaalkii Balad-xaawo oo la keenay Muqdisho
Wararkii ugu dameeyay xaaladda degmada Balad-xaawo iyo Saraakiisha oo…